downloads 32 768
Elu mma ugbo elu! Mara mma na agba nke Air France (ochie na agba 2005). -Agụnye a isi VC na a 2D panel si Ken Mitchel, plus omenala ụda.
The Airbus A340 bụ a anọ-engine airliner ogologo osisi elu ikike arụpụtara site Airbus. Na ọ bụ dị ọtụtụ nsụgharị dabere na ikike ma ọ bụ iche na ha chọrọ. Ezinụlọ a nke ngwaọrụ a haziri na a haziri nke yiri nke Airbus A330, ma na-onwem na anọ engines kama abụọ.
Na June 1993, ndị A340-211 eguzobewo ụwa abụọ ndia n'oge a nloghachi ụgbọ elu si Le Bourget ọdụ (France) International Airport na Auckland (New Zealand): a ndekọ anya 19 na 014.31 Kilomita kpuchie enweghị na-emetụ n'ala, na a ọsọ ndekọ na nkezi nke 789.86 km / h. A ndekọ a gbajiri ugboro abụọ ebe ọ bụ site Boeing 777, na oge mbụ na April 1997. (Isi Wikipedia)
Onye edemede: Project Open Sky, 2D panel site Ken Mitchel